Mogadishu Journal » WAR DEG DEG AH: Man City ayaa ganaaxday Mendy kadib markii ciyaaryahanka lagu soo oogay afar dacwadood oo kufsi ah
Manchester City ayaa shaqada ka joojisay Benjamin Mendy inta baaritaan lagu sameynayo ka dib markii Cheshire Constabulary ay ku soo oogtay ciyaaryahanka afar dacwadood oo kufsi ah iyo hal dacwad oo kufsi ah.
Dacwadaha ka dhanka ah 27-jirka dambeedka bidix ayaa la xiriira saddex cabasho oo ka weyn 16 sano jir, iyada oo dhacdooyinka la sheegay in ay dhaceen intii u dhaxaysay Oktoobar 2020 iyo 21 Ogosto, boliiska ayaa sidaas sheegay.
“Adeegga Xeer -ilaalinta (Crown Prosecution Service (CPS)) ayaa u oggolaaday Cheshire Constabulary inay dacwad ku soo oogto nin la xiriira eedeymo la xiriira xadgudub galmo,” ayaa lagu yiri bayaan booliis Khamiistii.
“Benjamin Mendy, oo 27 -jir ah, waxaa lagu soo oogay afar dacwadood oo kufsi ah iyo hal xad -gudub galmo.
“Dacwadaha ayaa la xiriira saddex cabasho oo ka weyn 16 sano waxaana lagu eedeeyay inay dhaceen intii u dhaxaysay Oktoobar 2020 iyo Ogosto 2021.
“Mendy, oo ka tirsan Wadada Inlee, Prestbury, ayaa dib loogu celiyay xabsiga booliska waxaana lagu wadaa inuu ka soo muuqdo Maxkamadda Chester Magistrates Jimcaha 27 Ogosto.
“Cheshire Constabulary iyo Adeegga Xeer -ilaalinta waxay rabaan inay xusuusiyaan qof walba in dacwadaha ciqaabta ee ka dhanka ah Mendy ay nool yihiin iyo inuu xaq u leeyahay maxkamad cadaalad ah.
"Aad bay muhiim u tahay inaysan jirin war bixin, faallo ama wadaagida macluumaadka onleenka taas oo sinaba u xumayn karta dacwadaha socda."
Eedeymaha ka dib, City ayaa soo saartay bayaan ay ku tiri: “Manchester City waxay xaqiijin kartaa in ka dib markii ay boolisku dacwad ku soo oogeen maanta, Benjamin Mendy waa la joojiyay ilaa baaritaan lagu sameynayo.
"Arrintu waxay ku socotaa hab sharci ah, sidaas darteed naadigu ma awoodo inuu faallo dheeraad ah bixiyo ilaa nidaamkaas la dhammaystirayo."
Dowlada India oo burburisay Masaajid caan ah iyo caro ka dhalatay (Sawirro)